About — njem Lee - Official Site
Wuru na-etu ọnụ dị adị na-ekwurịta okwu siri ike Baịbụl eziokwu na a na-eto eto, multicultural-ege ntị na-ekere òkè na n'ụzọ ndị dị ike. Edu Njem Lee, onye edemede, onye nkụzi, na hip-iwuli elu artist, Wuru na-etu ọnụ na-achọ iji kwadebe na-agba ume a ije nke Kraịst-eso ụzọ bụ ndị unashamed na-etu ọnụ na ha na Jehova.
Njem Lee bụ onye edemede, onye nkụzi, hip-iwuli elu artist, na echiche ndú. A pastọ ke Atlanta, ọ mgbe nile ọkwọrọde na-akụzi na Christian nzukọ na ihe, na emewo ka e nwee ya music ruo ọtụtụ puku ndị gere gburugburu ụwa.
Na ya akwụkwọ mbụ, The Good Life, Lee ezo ndị dị ndụ jupụtara dị naanị na Kraịst - a ndụ ọzọ ihe ọ bụla ụwa pụrụ inye. Ya nke abụọ n'akwụkwọ, ebili, oku a tọrọ ọgbọ bụghị na-eche na-eso Chineke, ma na-ebili na-ebi ndụ ugbu a.
Dị ka a hip-iwuli elu artist, Lee si music natara oké egwu tokwara, mgbe na-eru a buru ibu ma na-eto eto na-ege ntị. Ọ na-ndibọhọ a stellar award na e nominated maka ọtụtụ nduru Awards. Ya ikpeazụ atọ albums nwere debuted na #1 na German Gospel chaatị dị iche iche, na ya kasị nso-nso album, ebili, debuted na #2 na German RAP chaatị dị iche iche na #16 na German 200.
Njem si kasị ọchịchọ ya ide, ozizi, ma na-arụ bụ iji na-ekwusa ịdị mma na ebube nke Jizọs Kraịst.
Iji akwụkwọ Njem Lee izi, ekwusa ozi ọma, ma ọ bụ igosi na gị omume, kọntaktị WME.